Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla: iingcebiso kunye neentlobo | Amadoda aQinisekileyo
Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla
Ukuhamba ngenkqayi yenye yezona zinto zimbi endodeni ebomini bayo bonke. Baninzi abafana ekufuneka bajongane nengxaki yokuba nenkqayi nakwizigaba zabo ezincinci. Kubalulekile ukuba ungoyiki kuba ukubakho kwempandla kuxhomekeke kubuhle obukhethileyo. Zininzi iinwele zamadoda anempandla ukwenza uninzi lwamanqanaba okulahleka kweenwele.
Kule nqaku siza kukubonisa eyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele zamadoda anempandla.
1 Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla
1.2 Inkundla yomkhosi
1.3 Cheba ngokupheleleyo
1.4 Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla: Ivy League
1.5 Umva odibeneyo
1.6 Idityaniswe ecaleni
1.7 Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla: I-Tupe ene-gradient
1.8 Mde kwaye uqinile
1.9 Izinwele zamadoda anempandla: fade ngeenwele ezimfutshane
Inwele echanekileyo inokuyenza ibonakale ukunciphisa ukubonakala kwemigca yokunciphisa iinwele kwizinwele nakwisithsaba. Kukho iinwele ezininzi zokucheba iinwele ezinezitayile ezininzi. Olunye lwezi zinto zisikiweyo ziindlela ezithandwayo ngokwenyani kulo nyaka, ngelixa ezinye zizinto zakudala ezinesidima ezingaphumiyo kwisitayile. Zonke ezi zinto zisikiweyo zilungile ekwenzeni ukuba iinwele zibonakale zijiyile, ngakumbi ngaphezulu.
Makhe sibone ukuba zeziphi iinwele ezahlukileyo zamadoda anempandla anokunceda ukwenza isitayile sekhanda lakho:
Kumadoda amaninzi, ukutsheva ngokupheleleyo kusarhabaxa. Ukucheba sisono esilula samadoda esijongeka sihle ukuba iinwele ziqala ukubhitya kwindawo ejikeleze isithsaba kunye neenwele. Luhlobo lweenwele ezinceda ukunciphisa ukubonakala kwentloko yeenwele ngokutsala umdla wobuso bakho.
Yenye yeenwele zokucheba zamadoda anempandla ezihlala zijongeka zilungile. Sesinye sezona zono zidumileyo zamadoda anokubuyisa okanye ngaphandle kokuphola. Isebenza ngokuguqula ingqalelo ebusweni bakho, kodwa ubude beenwele bunokugcinwa ngaphezulu. Le yindawo yokuluka iinwele enkulu kwabo bahamba bald kwizikhundla zobudala ezincinci ukugcina iinwele zabo zinde, kuxhomekeke kwixesha lonyaka.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, kukucheba iinwele okuqinisekileyo. Ukuba uneenwele ezingalinganiyo kwaye ulahlekelwa ziinxalenye, ukucheba ngokupheleleyo lolona khetho lufanelekileyo. Umququzeleli uya kuhlala ekugcina ucocekile kwaye ubekekile. Kwakhona, isitayela sendoda esineenwele. Awuyi kuba nexhala malunga nokudibanisa iinwele zakho kwakhona. Eyona nto iphosakeleyo yile ntloko indala iveziweyo kwaye inokubangela iingxaki zolusu ngenxa yemitha yelanga. Kubalulekile ukugcina intloko yakho ifumene amanzi kwaye ikhuselekile elangeni ngalo lonke ixesha.
Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla: Ivy League
Olu hlobo lokucheba iinwele luye lwenziwa ngabadlali abaninzi beemovie. Isitayile kwaye yindlela efanelekileyo yokulwa nelahleko yeenwele. Yeyona ndlela ilungileyo kwabo banomthamo omncinci kwizinwele zabo ngaphandle kokulahleka.
Iye yaba yenye yezona zithandwa kakhulu kunye nesimbo esithandwayo samadoda amaninzi. Yindlela yokucheba iinwele phambukisa ingqwalaselo ekunciphiseni iinwele. Thatha nje ikama kunye nemveliso ethile kwaye uslayite iinwele zakho ngasemva kwentloko yakho ukusuka ngaphambili. Ukwenza ibonakale ingcono kwaye iinwele ziya kuba namandla ngakumbi, ungasebenzisa into encinci yokulungisa kodwa ungazibaxi, ukuthintela iinwele ekubonakaleni zinamafutha.
Ngenye yeeklasikhi emadodeni aza kuba nenkqayi. Kule hlobo lweenwele, iinwele zinde kwaye zigcinwe ngaphezulu kwendawo apho ibala elinenkqayi libalaseleyo. Ngale ndlela, ukubonakala kwempandla kuncitshisiwe. Oku kunika inkohliso yokuba iinwele ziyatyeba kwaye zinzima. Ingxaki kuphela kolu hlobo lokucheba kwamadoda anempandla kukuba kufuneka uyenze ngokuchanekileyo. Ukuba ayenziwanga ngokufihlakeleyo, iya kubonakala ngathi ngumkhusane weklasikhi. Ukuze uyenze ngokuchanekileyo, kuya kufuneka usike iinwele zakho ukuze inde ngaphambili. Siza kusebenzisa ikama nenani elincinci lemveliso kunye nekama esinayo ngasemva nakwicala. Nje ukuba sigqibe ukudibanisa iinwele zakho, siya kufaka i-fixative encinci ukunika ivolumu engakumbi kwaye siyishiye ilungisiwe.
Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla: I-Tupe ene-gradient
Ukuba awungomnye wabo basenenkqayi kakhulu, maninzi amathuba ezinto zokulungisa iinwele. I-gradient yenye yezona zinwele zinemfashini. Ukuba uyayixuba kunye ne-tupe isebenza ngcono ngobude obungezelelweyo. Into ebalulekileyo bubude obuphezulu bentloko. Yinwele enomtsalane ekwenza ubonakale umncinci. Ikwasebenza ukunciphisa imiqondiso yokuncipha nokuncipha kweenwele.
Mde kwaye uqinile
Enye yeentlobo zeenwele zokucheba ngeentlawulo ezinje ngokusikwa komkhosi kukucheba okuphezulu kwaye okuqinileyo. Yinqumle ephefumlelweyo emkhosini kwaye, nangona ingeyiyo eyeyona ibhetyebhetye, yenye yezona zinto zisebenza ngokufanelekileyo xa kufikwa ekufihleni impandla. Ukusika okuphezulu kwaye okuqinileyo kunomdla ukuseta kakuhle kumacala ezinwele ezinde ngaphezulu. Ihlala itsala umdla kude kude noboya obuyehlayo kwaye yenza ukuba iinwele zibonakale zide. Olunye uncedo lwexolo eliphakamileyo nelomeleleyo kukuba kuyanceda ukuqaqambisa amanqaku obuso.
Izinwele zamadoda anempandla: fade ngeenwele ezimfutshane
Ngenye yezona zinwele zinemfashini kunamadoda anempandla. Yinto ephelayo eneenwele ezimfutshane ezikuvumela ukuba ube nolawulo kancinci ngaphezulu kwizinwele kunye nokubonakala ngokubanzi kweenwele eziyekethayo ngenxa yenkqayi. Olu hlobo lokusika itsala ingqalelo kude noboya obude bude obuphezulu kwentloko. Ezi ntlobo zokucheba zisebenza ngcono kakhulu ukuba usekwizigaba zokuqala zokulahleka kweenwele.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neenwele ezifanelekileyo zeenwele zamadoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukucheba iinwele kwamadoda anempandla
Amanyathelo okufunda tattoo